Mahotera anodhura - Mahotera ekutsvaga enjini nezvose zvivimbiso!
Izvi kutsvaga hotera yakachipa kune imwe nzvimbo munyika? Kutenda kune yedu locator iwe unogona tsvaga hotera yauri kutsvaga pamutengo unodhura pane internet uye nezvose zvivimbiso.
Dzimba dzakachipa dzekutsvaga injini
Kuburikidza neyekutanga injini yekutsvaga iwe yaunogona tsvaga hotera iwe yaunoda uye chengetedza kutenda kumatengo edu makuru. Uchishandisa iri nyore kwazvo, unongofanirwa kuratidza kwauri kutsvaga hotera, zuva rekupinda nekubuda muhotera uye huwandu hwevanhu uye / kana makamuri aunoda, rova ​​bhatani rekutsvaga uye ndizvozvo. Kubva ipapo injini yedu yekutsvaga ichaita mashiripiti anodiwa kuti uwane iwe BEST PRICE kubva kwese kwese internet. Chii chiri nyore?
Paunofunga zvekuronga zororo rakanaka, iwe unofanirwa kutarisisa kune akati wandei mapoinzi kuti uzviite. Imwe yeakanyanya iko kutsvaga kwekugara. Mukati maro tinosarudza kutarisa iyo zvakachipa mahotera. Nekuti mavari unogona kuwana akanakisa mamiriro pasina kushandisa mari. Tsvaga zvese zvaunoda kuti uzive kuti uwane nyore kuwana iyo hotera yezviroto zvako! Kana iwe uchida kuwana yakanakisa mutengo unongofanira iwe tinya pano.
1 Dzimba dzakachipa dzekutsvaga injini
2 Zvakanakira kubhuka mahotera pamhepo
3 Maitiro ekubhuka hotera pamhepo
4 Tsvaga hotera dzakachipa
5 Ongororo yehotera
Zvakanakira kubhuka mahotera pamhepo
Kutenda kune iyo iyo internet kuti yapinda muhupenyu hwedu, yatove yakapusa zvishoma. Zvakanyanya zvekuti for kuronga kufamba, hatichafaniri kubva pasofa redu. Isu tinodzivirira kumirira kwenguva refu pane chero hofisi yekufambisa kana parunhare. Asi kwete chete isu tichakwanisa kusevha iyo nguva, asi isu zvakare tichakwanisa kuverengera pamitengo yakanaka kwazvo mune yedu online kufamba. Kune akawanda mapeji anopa makuru kuderedzwa uye akawanda mabhenefiti kana uchibhuka mahotera pamhepo, nekuti hapana zvimwe zvekushandisa izvo zvinopihwa neanoshanda.
Mitengo: Nekuda kwakawanda, iyo madhiri ehotera ivowo vakuru. Uye zvakare, kana tikatarisa padhuze, isu tinogara tichizoponesa zvishoma pane kana tikachengeta pawebhusaiti pachezvayo. Nguva dzose zvinokurudzirwa kutsvaga mawebhusaiti ehotera uye kuita fananidzo iri nyore. Tora mutengo wakanakisa HERE.
Nyaradzo: Sezvatataura, hazvina kufanana kuti tizviratidze mu rwendo rwekufamba pane kugara mumba medu. Pano isu tichava nenguva yakawanda sezvinobvira kuti tikwanise kusarudza pekugara zvakanaka. Unogona kutarisa akasiyana mawebhusaiti uye woita enzaniso yemhando dzese dzehotera, zvese zvakanakira nekuipira uye usati waisa tsoka pairi.
Kuwanika: Zvisinei unoita nguva yakadii. Iwo mawebhusaiti anogara akagadzirira kuzvigamuchira, kungave mangwanani kana iwe ukasarudza usiku.
Kusimbiswa: Mumasekondi mashoma, unenge watove nekusimbiswa kwenzvimbo yakatarwa. Ndokunge, iyo iko kusimbiswa chichava chengetedzo yako yakanaka. Nayo, hapachakwanise kunge paine zvikanganiso, zvakapesana chaizvo. Iwe unenge uine yako kamuri inishuwarenzi kuhotera yakasarudzwa.
Maitiro ekubhuka hotera pamhepo
Zvino zvatava kuziva zvakanakira kuwana mahotera kuburikidza neinternet, tichaenda nhanho imwe kumberi. Iwe unoziva here kubhuka hotera pamhepo?. Iyo zvakare imwe yeakareruka mapoinzi atinogona kuita pasina makuru matambudziko. Tinoda a muwani wehotera, iyo yatichawana papeji. Iyo fomu iri nyore kwausingazobvunzwe ruzivo rwako, asi panzvimbo pekuenda kwaunoda kuenda pazororo. Pamusoro peizvi, zvichave zvakareruka kwauri kuti usarudze ese mazuva ekuuya nekusimuka. Kana izvi zvangoitwa, isu tichafanirwa kusarudza iyo kamuri zvinoenderana nevanhu.
Kana tazadza runoenzanirana neruzivo, isu tinongofanirwa kubaya "yekutsvaga" bhatani uye rinotisiira isu ese mahotera pamwe nesarudzo dziripo kwatiri kuenda. Kana panguva ino pasina Makamuri emahara, iwe unogona kugara uchichinja misi zvakare uye wotarisa dzimwe sarudzo. Nenzira imwecheteyo, rondedzero ine akati wandei mahotera ichaonekwa. Ikoko unogona kudzvanya pane yega yega kuti uone mamiriro ayo, mifananidzo yemakamuri, nharaunda, nezvimwe.
Tsvaga hotera dzakachipa
Kana tangopinda mune rondedzero yemahotera, isu tinowana izvo zvakanaka zvinopihwa. Izvi zvinodaro nekuti sarudzo dzakanakisa dzinogara dzichiita sedzinoita kuti rwendo rwacho ruwedzere kudhura. Isu tinogara tichifunga kuti zvibvumirano hazvingaratidzike munzira yedu, nekuti hapana chimwe chiri kure nechokwadi. Kubva muhombe zvinopihwa zve mahotera ese anosanganisira kusvika kuhafu bhodhi kana chete nebreakfast.
Mazuva: Mazuva acho ndiwo anogona dzimwe nguva kuwedzera mutengo wehotera. Isu tinoziva kuti kune mwaka wepamusoro uye kuti mairi, mitengo inokwira. Ndokusaka, sekureba sezvatinogona, isu tichachinja mazuva. Hazvina kufanana kuenda musi weChishanu kupfuura neChina masikati.
Mamiriro ezvinhu: Pasinei nekwatinoenda, zvinogara zvichikwanisika kusarudza mahotera asiri epakati zvakanyanya. Nenzira iyi, isu tinoona kuti mutengo uchave zvakare wakasiyana zvachose. Tsvaga pakati pe pokugara pedyo nezviteshi, kunyangwe vachibviswa zvishoma kubva kunzvimbo huru.
Kubhuka: Kunyangwe chinhu chiri pachena kuita iyo kuchengetedza kusati kwaitika, dzimwe nguva hazvigoneke. Kugadzirira kwekutanga kunogona kuve kuchengetedza kukuru. Ehezve, mazuva ano, isu tine mamwe mahotera ayo anopa makuru madhora kana paine mashoma chete emahara makamuri akasara Iwe unogara uchifanira kunyatsoteerera!
Kana taita kuchengetedza, tinogara tichida kuziva kana tiri kuita zvakanaka. Imwe yedzakanakisa nzira dzatinadzo dzeizvi, ndeye ongororo yevatengi. Kunyangwe vachizenge vakasiyana kwazvo, vanogona kugara vachitibatsira zvishoma kuti tiwane pfungwa yezvatichawana. Chekutanga pane zvese, maonero akadaro anowanzo kuperekedzwa nenhamba. Chichava chikamu chakapihwa masevhisi akasiyana siyana ane hotera.
Kana iwe uine zvinopfuura zvitanhatu, saka isu tinogona kutaura nezve dzinonakidza kwazvo mahotera. Ehezve, iwe unogona kugara uchizvirega uchitorwa nevaya vasina kukosha zvakanyanya. Zvakareruka, isu tinokurudzira kuti iwe uverenge yega yega mhinduro zvakanaka kuti uzive yakaderera mamaki. Pakati pevakawanda ratings iwe unozogona kuziva kana iine yakanaka yekuchenesa uye nyaradzo. Sevhisheni uye hushamwari pamwe nekuti ruzha nderimwe remapoinzi asina kunaka kana nzvimbo yacho haina kukodzera.
Izvo zvakakoshawo kutarisa iyo nguva yekusvika neyekugamuchira. Zvinogara zvichikurudzirwa kuti awa maawa makumi maviri nemana. Nenzira imwecheteyo, isu tichafanirwa kugadzirisa ese masevhisi avanotipa. Neichi chikonzero, uye kudzivirira kushamisika, zvakafanira kuti uverenge zvese nokungwarira. Kunyangwe kuita kuti zvese izvi zvinyanye kunakidza, hapana chakafanana nekutibatsira isu nemaonero ekuona. Mifananidzo yacho zvakare yakakwana kutsigira makomendi uye kutipa yakafararira pfungwa yezvakatipoteredza.
Sezvatinogona kuona, kune vese vafambi, kutsvaga madhiri ehotera uye kuronga nzendo pamhepo kutamba kwemwana. Kunyangwe zvikatora nguva yakati rebei, ichagara iri varaidzo huru uye tinoziva kuti tiri mumaoko akanaka kune vamwe mazororo emutengo wakaderera chisingakanganwiki.